Palestine and Philistines
ယခုခေတ်မှာ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးဆိုတာ နိုင်ငံမရှိတဲ့လူမျိုးလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး အများစုဟာ အစ္စရေးနိုင်ငံ (သိမ်းပိုက်ခံ West Bank & Gaza Strip) ၊ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၊ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ စသည်တို့မှာနေထိုင်ပြီး၊ ကမ္ဘာအနှံအပြားမှာ ၁၁သန်းလောက် ပြန်ကျဲနေထိုင်လျှက်ရှိပါတယ်။ အစ္စရေးလူမျိုးများလိုပဲ တိုင်းတပါးအုပ်ချုပ်မှုများမှာ နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီနေထိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၇ခုနှစ်မှာ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံအမည်နဲ့ အစ္စရေး၊ပါလက်စတိုင်း လူမျိုး၂ခုကို ဗြိတိသျှနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့က ထူထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂ဖက်စလုံးမကျေမနပ် စစ်တိုက်ခိုက်ရင်း အစ္စရေးက အပြီးပိုင်သိမ်းယူပြီး အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်လိုက်ပါတယ်။
သမိုင်းကြောင်းကို ကြည့်ရင် အစ္စရေး (ဂျူးလူမျိုးသမိုင်း) လိုပဲ၊ ရာဇ၀င်အရှည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ခုနှစ်ရာစု အာရပ်၊မူဆလင်များ ပါလက်စတိုင်းဒေသကို မသိမ်းပိုက်မှီက ခရစ်ယာန်၊ ဂျူး ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပြီး၊ အခုအများစုဟာ မူဆလင်ဘာသာဝင်များဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယန်များစွာလည်း ရှိပါတယ်။ အာရပ်ပါလက်စတိုင်း Palestine Arabic စကားကို ပြောဆိုကြပါတယ်။ အစ္စရေးနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ ပါလက်စတိုင်းများကတော့ ခေတ်ပေါ်ဟေဗရူး (အစ္စရေးဘာသာစကား) ကိုပြောတတ်ကြပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်းများ သူတို့နယ်မြေလို့ ကြေညာထားတဲ့ မြေပုံဖြစ်ပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများ နေထိုင်တဲ့နေရာများ အစ္စရေး၊ လက်ဘနွန်၊ ဆီးရီးယား၊ ဂျော်ဒန် စတဲ့နိုင်ငံများရဲ့ နယ်မြေများပါဝင်ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ စာရွက်ထဲမှာပဲ နယ်မြေရှိပြီး၊ နိုင်ငံပျောက်နေပါတယ်။ သို့သော် ကုလသမဂ္ဂမှာ နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်၊ ပြောရေးဆိုခွင့် ရရှိထားပါတယ်။
Don Fleming ရဲ့ အဘိဓါန်မှာ ဖိလိတ္တိလူမျိုးဟာ ယခုခေတ် ပါလတိနပြည်လို့ ခေါ်တဲ့နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာမှာ ခါနာန်လူမျိုးများ လို့ခေါ်ပြီး၊ ခါနာန်ဘုရား၊ ဗာလဘုရား၊ ဒါဂုန်ဘုရားနှင့် ဗေဇေဗုလဘုရားများကို ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ ဖိလိတ္တိမြို့ငါးမြို့မှာ ဂါဇ။ အားဇုတ်၊ အာရှ၊ ကေလုန်၊ ဂါသ နဲ့ ဧကလုန်မြို့တို့မှာ အများအပြားနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ က္ကုသရေလလူမျိုး (အစ္စရေး) နဲ့ ဖိလိတ္တိလူမျိုးများ တိုက်ပွဲများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးများ အတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မောရှေခေါင်းဆောင်တဲ့ လက်ထက်က က္ကူသရေလများ၊ ယောရှုခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ ခါနာန်ပြည်ကို အောင်နိုင်တဲ့အခါ ဖိလိတ္တိလူမျိုးများ နယ်မြေကို မသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါ။ ရှောလုမင်းလက်ထက် ဖိလတ္တိလူမျိုးများက က္ကုသရေလပြည်ကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို သိမ်းယူသွားခဲ့သော်လည်း ဒုက္ခများစွာပေးတဲ့အတွက် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဝိတ်မင်းလက်ထက်မှာ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပြီး၊ ဆော်လမွန်မင်းလက်ထက်မှာ ငြိမ်းချမ်းခဲ့ပါတယ်။
က္ကုသရေလနဲ့ဖိလိတ္တိ သမ္မာကျမ်းစာမှတ်တမ်း တိုက်ပွဲကြီးများ။
ပဋိညာဉ်သေတ္တာဆုံးရှုံးခြင်း Philistines capture the Ark of the Covenant (1 Samuel 4:1–10)
ဖိလတ္တိစစ်ရှုံးခြင်း၊ Philistines defeated at the Battle of Eben-Ezer (1 Samuel 7:3–14).
ဂျော်နသန် (ရှောလုမင်းရဲ့သားတော်) စစ်ရှုံးခြင်း Jonathan and his men were routed by Philistines (1 Samuel 14).
ဒါဝိတ်နှင့်ဂေါလိယ David defeats Goliath in single combat at near the Valley of Elah, (1 Samuel 17).
ဟေဇကိမင်း Hezekiah defeated the Philistines (2 Kings 18:5-8)
Ehrlich, Carl S. (1996). The Philistines in Transition: A History from ca. 1000-730 BC စာအုပ်မှာ BC1475 မှ (ခရစ်မပေါ်မှ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀)ကတည်းက ဖိလိတ္တိလူမျိုးများ ရှိခဲ့ကြောင်းရေးထားပါတယ်။ BC 10th ဒါဝိတ်မင်း၊ ဆော်လမွန်မင်းခေတ်အထိ အင်အားကြီးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း BC 7th နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖိလိတ္တိလူမျိုးများ အားအင်နဲပါးသွားပြီး၊ အခြားလူမျိုးများနဲ့ ရောလျှက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဖိလိတ္တိလူမျိုးများရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဘာသာစကားပြောဆိုမှုများ အစအနရှာမရအောင် ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရစ်တော်ဖွားမြင်တဲ့အချိန်မှာ ဖိလိတ္တိလူမျိုးဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး။
ပါလက်စတိုင်းနဲ့ဖိလိတ္တိ လူမျိုးနှစ်မျိုး စာလုံးပေါင်းများကို လေ့လာလျှင် မတူညီကြပါ။ အသံထွက်လည်း တူမည်မဟုတ်ပါ။
မြန်မာ Burmese; ပါလက်စတိုင်း - ဖိလိတ္တိ
အင်္ဂလိပ် English; Palestine - Philistines
ဂရိ Greek Παλαιστίνη - Φιλισταίοι
အီတလီ Italy; Palestina - Filistei
ဟေဘရူး (အစ္စရေး) နှင့် အာရပ် ဘာသာစကား၂ခုတွင်လည်း ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်သူများ လေ့လာနိုင်ပါတတယ်။
အချို့သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာသူများနဲ့ ဂျူးသမိုင်းဖတ်ရှု၊ ရေးသားသူများက ဒီလူမျိူး၂ခုကို အတူတူလို့ ရေးကြ၊ပြောကြပါတယ်။ နေထိုင်ကျက်စားခဲ့တဲ့ နေရာကတော့ အတူတူပဲဖြစ်လို သွေးနှောမှုရှိမှာတော့ သေချာပါတယ်။ ဥပမာ မြန်မာပြည်က မွန်လူမျိုးနဲ့ပျူလူမျိုး၂ခုလို၊ မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်ခဲ့တာတော့ အတူတူဖြစ်ပေမဲ့၊ အခုအချိန်မှာတော့ ပျူလူမျိုးဆိုတာ အခုခေတ်မှာ မရှိတော့ပါဘူး။ အလားတူပဲ ဖိလိတ္တိလူမျိုးဆိုတာ အခုခေတ်မှာ မရှိတော့ပါဘူး။
အထက်ပါလေ့လာမှုအရ ယခုခေတ် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး နဲ့ သမ္မာကျမ်းစာဖိလိတ္တိလူမျိုး တို့ဟာ မတူကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by Witmone at 8:50 PM